Samachar Batika || News from Nepal » ‘मलाई आमाबुवाले ५ लाखमा बेच्न लागेका छन्’, युवतीले भनिन्….
‘मलाई आमाबुवाले ५ लाखमा बेच्न लागेका छन्’, युवतीले भनिन्….
काठमाडौं। एक युवतीको भिडियो सामाजिक संजालमा भा’इरल भयो । भिडियोमा युवतीले आफ्ना मातापितामाथि नै ग’म्भीर आ’रोप लगाएकी थिइन् । उनले आफूलाई आफ्नै मातापिताले ५ लाखमा बेच्न लागेको बताएकी थिएन् । उनको यो भिडियो केही समयमै भाइरल भयो । भिडियो भाइ’रल भएपछि एक सामाजिक संस्थाले यस विषयमा चासो लियो ।
युवतीले भिडियोमा आफूलाई आफ्ना मातापिताले ब’न्धक बनाएर राखेको बताएकी थिइन् । उनको स’नसनीखेज भिडियो भा’इरल भएपनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय संस्थाले उनलाई खोज्न थाल्यो । सामाजिक संस्थाले पुलिसको सहयोग लियो र युवतीको घर खोज्दै गयो । घरमा पुग्दा ती युवती घरमा भेटिइनन् ।
युवती आफ्नी फुपुकहाँ भएको थाहा पाएपछि उद्धारकर्ता फुपुको घरमा पुगे । फुपुकहाँ गएर युवतीलाई भेटेपछि जब रहस्य खुल्यो, उ’द्धारकर्ता चकित परे ।
घटना भारतको उत्तर प्रदेशको बागपत जिल्लाको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । ती युवतीले आफ्ना मातापिताले आफूलाई हरियाणाका एक व्यक्तिलाई बेच्न लागेको र मूल्य पनि ५ लाख तय भइसकेको बताएकी थिइन् । मातापिताले आफूलाई महिनौंदेखि ब’न्धक बनाएर राखेको उनले आ’रोप लगाएकी थिइन् । उ’द्धारकर्ताले फुपुको घरमा पुगेर युवतीलाई आफ्नो क’स्टडीमा लिए ।
पुलिसले गरेको सोधपुछका क्रममा युवतीले जे बताइन् त्यो सुनेर उ’द्धारकर्ता चकित परे । सोधपुछका क्रममा युवतीले आफूले प्रेमीसँग बिहे गर्न चाहेको तर परिवार यसको वि’रुद्ध भएकोले उनीहरुलाई फ’साएर प्रेमीसँग बिहे गर्न यस्तो गरेको बताइन् । प्रेमीसँग टाढा राख्न मातापिताले नै उनलाई फुपुको घरमा पठाएका थिए ।
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०९:०२